Sifaynta Diinta Islaamka - Wikipedia
Ka sifeynta Diinta Islaamka wixii lagu soo daray iyo Muslimiinta oo lagu barbaariyo Diintooda sidii ay ku soo degtay
Wuxuu yiri al-Callaama Sheekh Albaani -Eebbe ha u naxariistee Isagoo la hadlaya Muslimiinta ku xiran Diintooda, gaar ahaan kuwooda dhalinyarada ah ee la socda ugu horeyn dhibaatada heysata Muslimiinta, marka xigtana isku taxalujiya sidii ay u badbaadin lahaayeen Muslimiinta. Waxaan leeyahay Muslimiintaas waxaa lagu badbaadin karaa Muslimiinta laba arimood oo kala ah:
التصفية: Waxaan kala jeedaa sifeynta: In loogu soo bandhigo dhalinyarada Muslimiinta Diintooda Islaamka iyadoo laga sifeeyay wixii lagu soo daray qarniyaalkii la soo dhaafay oo dhan; Haddii ay ahaan lahaayeen Caqiidooyin, Khuraafaad iyo Bidcooyin. Waxyaabihii lagu soo darayna waxaa ka mid ah Axaaddiis aan sugnayn, ay dhici karto inay yihiin kutiri kuteen موضوعة, sidaas darteed waa lagama maarmaan in laga dhabeeyo Sifeyntaas, maxaa yeelay sidaas waxaa ku jirta badbaadada Muslimiinta.
Sifeyntan waxaa laga wadaa in la soo bandhigo daawada kaas oo ah Islaamka, kaasoo daaweeyay mid u eg dhibkan, markay Carabtu ahayd kuwaan awood lahayn oo ay caaabudi jireen sanamyada.
Annaga waxaan ku khilaafsannahay ururada Islaamka oo dhan arinkan, waxaanu u aragnaa waa in laga bilaabaa Sifeynta Diinta iyo in lagu barbaariyo Muslimiinta Diinta sidii ay ku soo degtay oo wada socda. Ma inaan ku bilowno arimaha Siyaasadda miyaa, oo waxaa dhacda kuwa ku mashquulsan siyaasadda inaysan caqiidadooda toosnayn, oo waxaa dhacda hab dhaqankooda haddii laga eego xagga Diinta inay ka fog tahay Shareecada, iyo kuwa ka shaqeeya dadka iney iskugu keenaan urur, mana laha Manhaj cad oo la fahmi karo, sidaas darteed waxaad arkaysaa qaar badan oo iyaga ka mid ah noloshooda inuusan saamayn ku lahayn Islaamkaas ay had iyo jeer ku hadaaqaan, mana ku dhaqmaan Islaamka kuwaasi nafsad ahaantooda, waxayna isla markaasi kuwaasi kor ugu dhawaaqayaan waa in la isku xukumaa shareecada; waa oraah wanaagsan oo dhab ah, hase ahaatee فاقد الشيء لا يعطيه qofka wax uusan haysan ma siiyo cidna.
Ciladda ugu horeyso ee weyn waxay tahay: Iyagoo Islaamka u fahamsanayn faham sax ah, oo maxay sidaas u ahayn, waxaa ka mid ah ducaadda maanta kuwa u arka Salafiyiinta inay yihiin kuwo ku dhuminaya waqtigooda oo dhan Towxiidka, Eebbaha xumaanta ka hufnaayow, Alla muxuu aqoon daran yahay qofka sidaas oranaya, maxaa yeelay qofkaas wuxuu xasuusnayn ama uusan garanayn inay dacwaddii Anbiyada iyo Rususha ee sharafta lahaa ahayd ( أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) War dadow caabuda Eebbe kana dheeraada wixii Eebbe ka soo haray, oo Nebi Nuux amaan iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee 950 sano ee uu waday dacwada ma uusan ugu yeeri jirin dadka wax Islaax ah, Shareeco ah iyo Siyaasad toonaba ee wuxuu dhihi jirey:
يا قوم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت War tolow caabuda Eebbe kana dheeraada wixii Eebbe ka soo haray.
Nebi Nuux a.n.k. Islaax miyuu dadka ugu yeeri jirey? Mise in lagu dhaqmo shareecada? Siyaasad miyuu ka shaqayn jirey? Maya sidaas ma ahayn, ee wuxuu dhihi jirey kaalaya dadkeygow Eebbe caabuda wixii Eebbe ka soo harayna ka dheeraada. Nebi Nuuxna wuxuu ahaa Rasuulkii ugu horeeyay ee loo soo dira dhulka -sida ku soo aroortay Xaddiis Sugan- . Wuxuuna waday dacwadiisa 950 sano mana ugu yeeri jirin dadka waxaan ka ahayn Towxiidka waana howsha ay Salafiyiinta waqtiga ku dhumiyaan sidee ayey uga xumaan karaan qaar badan oo ka mid ah ducaadda Islaamiyiinta, waxayna gaaraan heer ay ku diidaan Salafiyiinta arinkaas.
التربية: Qeybta labaad ee Manhajkeena waa in lagu Barbaariyo Muslimiinta maanta, inaysan jiidan Adduunyada sidii ay u jiidatay kuwii iyaga ka horeeyay.
Oo Rasuulka amaan iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa wuxuu yiri: Saboolnimo idinkagama cabsanayo hase ahaatee waxaan idinkaga cabsanayaa in la idiin furo nolosha Adduunyada, oo ay idin galaafato sidii ay u galaafatay kuwii idinka horeeyay.
(( ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تُفتح عليكم زهرة الحياة الدنيا , فتهلككم كما أهلكت الذين من قبلكم )).
Waana cudur ay tahay Muslimiinta inay iska ilaaliyaan, oo aysan gelin laabtooda
(( حب الدنيا وكراهة الموت )) In la jeclaado Adduunyada oo la naco dhimashada. Sidaas darteed kani waa cudur ay tahay in la iska daaweeyo laguna barbaariyo dadka inay iska ilaaliyaan.
Xalkana wuxuu ku soo arooray dhamaadka Xaddiiska Rasuulka a.n.k. : (( حتى ترجعوا إلى دينكم )) ilaa aad dib ugu noqotaan Diintiina. Xalkuna waa in si sax ah loogu noqdaa Islaamka, Islaamka fahamkiisa saxda ah ee uu heystay Rasuulka Eebbe amaan iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo Asxaabtiisa.
Eebbe Kor ahaaye wuxuu yiri: ( إن تنصروا الله ينصُرْكم ) Haddii aad Eebbe u gargaartaan idinkana wuu idiin gargaarayaa, waxayna Culimada Mufasiriinta ah isku raaceen in نصر الله macnaheeda laga wado: Haddii aad ku dhaqantaan Shareecada Islaamka. Haddii gargaarka Eebbe uusan ku dhaboobaynin in la oogo Shareecadiisa mooyee, oo side bay ku suurtagaleysaa inaan hirgelino Jihaadka, anaga oo Eebbe u gargaaraynin; Caqiidadeena aysan toosnayn, akhlaaqdeenu ay xun tahay, sidaas darteed waa lagama maarmaan ka hor inta aynan Jihaadin waa inaan toosinaa Caqiidadeena ka dibna nafta sidaas ku barbaarinaa, iskana ilaalinaa wax kasta oo khilaaf noo keenaya.
( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحُكم ) Ha is khilaafina oo dabadeed guuldareysataan.
Oo marka aanu ka hortagno isqabqabsigaas oo aan ku beddelno midnimo; ayaanu ka dib la imaan karnaa awoodda maaddiga ah.
( وأعدوا لهم ما استطعْتُم من قوة ومن رباط الخيل ) Oo u diyaarsada cadowgiina intii aad kartaan oo awood ah.
Akhlaaqda Muslimiinta ee barbaarinta waa mid xun, waxaana lagama maarmaan ah in laga Sifeeyo Diinta wixii lagu soo daray iyo in Muslimiinta lagu barbaariyo Diintooda sidii ay ku soo degtay, Islaamkana si dhab ah loogu noqdo. Alla maxaan aad ula dhacay arinkan hadal uu ka yiri mid ka mid ah Ducaadda Islaamiyiinta – oo aan ka mid ahayn Salafiyiinta, hase ahaatee Asxaabtiisa aysan garanayn hadalkan:
(( أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم دولته في أرضكم )) .. Ku dhaqma nafsaddiina Islaamka si dadkana ay ugu dhaqmaan.
Sidaas darteed Ducaadda badankooda way ku qaldan yihiin markay hilmaansan yihiin mabda’eenaas, iyo markay leeyihiin: Waqtiga la joogo ma aha waqtigii Sifeynta Diinta iyo ku Barbaarinta Diinta sidii ay ku soo degtay, ee waxaa la joogaa xiligii is-aruursiga iyo is-kooxeysiga .. Oo sidee bay ku suurtagaleysaa is-aruursiga iyadoo la isku khilaafsan yahay Usuusha iyo Furuucdaba .. Waana wixii Muslimiinta kala dhantaalay awooddooda .. Daawada kaliyana waa tii aan horey u soo sheegay oo waa in si wanaagsan loogu noqdaa Islaamka saxda ah, ama in la hirgeliyo Manhajkeena ah in laga Sifeeyo Diinta wixii lagu soo daray iyo Muslimiinta oo lagu Barbaariyo Diintooda sidii ay ku soo degtay.
Maqaalkanna waxaa turjumay CabdiRisaaq Maxamed Cilmi "ina Warfaa" http://freewebs.com/ina-warfaa
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Sifaynta_Diinta_Islaamka&oldid=144071"
Last edited on 28 May 2015, at 14:01
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 May 2015, marka ee eheed 14:01.